News - 8 Siyaabood Oo Lagu Dili Karo Dhamaadkaaga Mill
8 Dariiqo oo Lagu Dili Karo Dhamaadka Mill
1. Ku socodsiinta si dhakhso leh ama gaabis ah
Go'aaminta xawaaraha saxda ah iyo quudinta aaladdaada iyo hawlgalku waxay noqon kartaa hawl adag, laakiin fahamka xawaaraha saxda ah (RPM) waa lagama maarmaan kahor intaadan bilaabin socodsiinta mashiinkaaga. Ku shaqeynta qalab aad u dhaqso badan waxay sababi kartaa cabirka qiyaasta suboptimal ama xitaa qalab qalad xun. Taa bedelkeeda, RPM hooseeya wuxuu sababi karaa leexasho, dhammeyn xun, ama si fudud u dhima heerarka ka saarista birta. Haddii aadan hubin waxa RPM ugu habboon shaqadaada, la xiriir qalabka soo saaraha.
2. Quudinta In Aad U Yar Ama Aad U Badan
Dhinac kale oo muhiim ah oo ah xawaaraha iyo quudinta, heerka ugu fiican ee shaqada ayaa aad ugu kala duwan noocyada aaladda iyo qalabka shaqada. Haddii aad ku shaqeysid qalabkaaga si aad u gaabis ah oo ah heerka quudinta, waxaad halis ugu jirtaa dib u noqoshada jajabyada iyo dardargelinta xirmooyinka qalabka. Haddii aad qalabkaaga ku socodsiiso si dhakhso leh heerka quudinta, waxaad sababi kartaa jab qalab. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay qalab yar.
3. Adeegsiga Xadgudubka Dhaqameed
In kasta oo dhaqan xumadu mararka qaarkood loo baahdo ama sifiican tahay, haddana guud ahaan way ka liidataa Milling Waxtarka Sare (HEM). HEM waa farsamo xaddidan oo adeegsanaysa Radial Depth of Cut (RDOC) iyo Axial Depth of Cut (ADOC). Tani waxay ku faaftaa xirmooyinka si siman guud ahaan geesaha jarista, faafiya kuleylka, waxayna yareysaa fursadda qalab qalad. Marka laga soo tago kororka nolosha qalabka, HEM sidoo kale waxay soo saari kartaa dhammaystir wanaagsan iyo heerka ka saarista birta sare, taasoo ka dhigaysa kobcin wax ku ool ah hareeraha dukaankaaga.
4. Adeegsiga Qalabka Aan Haynayn
Xuduudaha saxda ah ee socodsiinta waxay leeyihiin saameyn yar oo ku saabsan xaaladaha haysashada qalabka suubbinta. Xiriirinta mishiinka iyo aaladda oo liidata waxay sababi kartaa kala-bax qalab, ka bixid, iyo qaybo la xoqay. Guud ahaan marka la hadlayo, dhibcaha badan ee lala xiriiro aaladaha haysta waxay ku xiran yihiin shaashadda qalabka, ayaa si aad ah u aamin ah isku xirnaanta. Haydarooliga iyo qalabka hakin kara ee haysta ayaa bixiya waxqabad korodhsan oo ku saabsan hababka xoojinta farsamada, sida dib u habeynta shank qaarkood, sida Helical's ToughGRIP shanks iyo Haimer Safe-Lock ™.
5. Ma Isticmaalayo Joometri Isbedbeddelaya Helix / Pitch Joometri
Muuqaal ku saabsan noocyada kala duwan ee waxqabadka sare ee dhamaadka, hellika isbedela, ama heerka isbeddelka, joomatari ayaa ah isbadal khiyaano leh oo loogu talagalay joomatari dhamaadka dhagax dhamaadka. Astaantan joomatari waxay xaqiijineysaa in waqtiga udhaxeeya goynta xiriirka geeska leh shaqadu ay kaladuwan tahay, halkii ay isku mar noqon laheyd qalab kasta oo wareegaya. Kala duwanaanshahani wuxuu yareeyaa sheekaysiga isagoo yareeya iswaafajinta, taas oo kordhinaysa nolosha qalabka isla markaana soo saarta natiijooyin sare.
6. Doorashada Dahaarka Khaldan
In kasta oo aad u qaalisan tahay, qalab leh daahan loogu talagalay qalabkaaga shaqada ayaa sameyn kara farqiga oo dhan. Dahaarro badan ayaa kordhiya saliidda, gaabinta qalabka dabiiciga ah, halka kuwa kale ay kordhiyaan adkaanta iyo adkeysiga abrasion. Si kastaba ha noqotee, ma aha in dhammaan dahaadhyadu ay ku habboon yihiin dhammaan walxaha, farqiguna aad buu u muuqdaa alaabada birta iyo kuwa aan birta ahayn. Tusaale ahaan, daahan Aluminium Titanium Nitride (AlTiN) wuxuu kordhiyaa adkaanta iyo heerkulka iska caabinta maaddooyinka birta leh, laakiin wuxuu leeyahay xiriir aad u sarreeya oo aluminium ah, taasoo keenta isku xirnaanta shaqada ee qalabka goynta. Dahaarka Titanium Diboride (TiB2), dhanka kale, wuxuu leeyahay xiriir aad u hooseeya oo aluminium ah, wuxuuna ka hortagayaa jarista dhisida iyo xirxirida qashinka, wuxuuna kordhiyaa nolosha qalabka.
7. Adeegsiga Dheer Dheer
In kasta oo dherer dheer oo goyn ah (LOC) ay gabi ahaanba lagama maarmaan u tahay shaqooyinka qaarkood, gaar ahaan howlaha dhameystirka, waxay yareynaysaa adkaanta iyo xoogga qalabka wax lagu gooyo. Sida caadiga ah, qalabka 'LOC' waa inuu ahaadaa oo kaliya inta loo baahan yahay si loo hubiyo in qalabku haysto inta ugu badan ee asalka ah ee suurtogalka ah. Markasta oo LOC qalabku u nugul yahay leexashada waxay noqoneysaa, iyadoo dhinaceeda hoos u dhigeysa nolosheeda qalabka wax ku oolka ah iyo kordhinta fursada jabka.
8. Xulista Tirinta Tuuqa Qaldan
Sida ugu fudud ee ay umuuqato, tirinta biibiile qalab waxay leedahay saameyn toos ah oo xusid mudan oo ku saabsan waxqabadkeeda iyo xuduudaheeda socodsiinta. Qalab leh tirinta biibiile hooseeya (2 ilaa 3) wuxuu leeyahay dooxooyin biibiile waaweyn iyo xuddun yar. Sida LOC, substrate-ka yar ee ku haray qalabka wax lagu gooyo, wuu daciifaa oo wuu ka yara adkaadaa waa. Qalab leh tirinta biibiile sare (5 ama ka sareeya) dabiici ahaan wuxuu leeyahay xuddun weyn. Si kastaba ha noqotee, tirinta biibiile sare had iyo jeer ma fiicna. Xisaabinta biibiilaha hoose waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa aluminium iyo walxaha aan birta ahayn, qayb ahaan sababtoo ah jilicsanaanta qalabkaan waxay u oggolaaneysaa dabacsanaan dheeri ah heerarka ka saarista biraha ee kordhay, laakiin sidoo kale sababtoo ah sifooyinka jijimadooda. Maaddooyinka aan birta ahayn badanaa waxay soo saaraan waqti dheer, jajabyo adag iyo tirinta biibiile hoose waxay ka caawisaa yareynta dib u noqoshada qashinka. Qalabka tirinta wiishka sare ayaa badanaa lagama maarmaan u ah walxaha birta adag, labadaba xoogooda kordhay iyo sababta oo ah dib u soo celinta qashinku walaac kama yara maxaa yeelay qalabkani badanaa wuxuu soo saaraa jajabyo aad u yar.